Binance invests $ 10m n'ime Bermuda kaadị Program - Blockchain News
Binance invests $ 10m n'ime Bermuda kaadị Program
Binance ezube melite ya ọhụrụ zuru ụwa ọnụ nnabata center na Bermuda n'elu ọzọ ọnwa ole na ole, Premier David Burt ka a mara ọkwa.
Na-ekwu okwu na a nkwonkwo pịa ogbako on Friday, Burt mara ọkwa na a memorandum nghọta e bịanyere aka, n'okpuru nke Binance Charity Foundation ga-etinye $10 nde n'ebe nkuzi ihe metụtara tech. ihe ọzọ $5 nde ga-nyekwara ke blockchain startups.
Na n'elu nke, Binance ga-enyere Bermuda ọchịchị ịzụlite a usoro iwu kpuchie n'ihi cryptocurrencies na blockchain, nakwa dị ka iru a ọrụ ọhụrụ na mba.
Germany agaghị achọ Bitcoin ma ọ bụrụ na ọ na-eji dị ka a ugwo usoro
Germany agaghị achọ bi ...
Previous Post:South Korean Finance Minister: Kaadị egwu Fiat System
Next Post:St. Louis Federal Reserve: Bitcoin bụ Dị Ịgachi Ego
Ka 16, 2018 na 8:01 PM